Q. 3aad ee Thumaama Binu Uthaal
Thumaama oo cunaqabataynt ku soo rogay Qureysh
Thumaama Binu Uthaal siduu Rasuulka (scw) u amrayba wuxuu cumreystay iyadoo ay arkayaan qureysh, u dhawaanshaha Alle awgeed ayuu u gawracay, ee ma'uusan u gowracin sanamyadii ku yiilay hareeraha kacbada. Thumaama wuxuu ku soo laabtay magaalladiisa, wuxuuna tolkiisa amray in sahayda ay ka joojiyaan qureysh, sidii ayeyna ugu hoggaansameen amarkiisa, oo Thumaama wuxuu cunaqabatayn dhaqaale ku soo rogay qureyshtii deganayd Makka. Qureysh waxay u adkeysan waayeen cunaqabatayntii uu ku soo rogay Thumaama Binu Uthaal, waxayna cunaqabatayntii u keentay sicir-barar, iyo iyadoo gaajadii iyo abaartii ay ku faaftay dadkii degganaa Makka iyo nawaaxigeeda, jeer ay u cabsadeen naftooda iyo caruurtooda inay u dhintaan gaajo awgeed.
Qureyshi waxay Thumaama uga dacwoodeen Rasuulka (Scw)
Markay arrintu halkaas mareyso waxay gaaladii qureysh u cawdeen oo u qoreen Rasuulka (scw), iyagoo ku leh �waxaan kaaga baranay inaad xiriirisid qaraabada, dadkana aad ku boorrisid xiriirka qaraabada.., waa kan oo waxaad goysay qaraabadeena, waxaad waalidiintii ku laysay seefaha, caruurtiina waxaad ku laysay gaajo. Thumaama Binu Uthaal wuxuu naga gooyay sahaydeenii, oo wuu na dhibaateeyay, haddii aad u qoraysid qoraal aad ugu sheegaysid inuu noo soo celiyo sahaydii aan heli jirnay fadlan samee�. Rasuulka (scw) wuxuu warqad u diray Thumaama, isagoo farayna inuu ka qaado cunaqabatayntii uu ku soo rogay qureysh, sidiina ayuu Thumaama u fuliyay amarkii Rasuulka (scw).
Intaa wixii ka danbeeyay, Thumaama Binu Uthaal intuu noolaa oo dhan wuxuu ahaa kii u hoggaansama diinta, aadna u ilaaliya oo fuliya ballamihii Nebiga (scw). Markii uu Rasuulka (scw) la kulmay Allihii sarreeyay, uuna geeriyooday, markaasna ay carabtii billaabeen inay isaga laabtaan diinta iyagoo koox-koox ah, ayaa waxaa istaagay Musaylamata Al-kadhaab kana dhashay qabiilka reer Bani Xanifa isagoo dadka ugu yeeray inay isaga rumeeyaan. Haddaba waxaa istaagay Thumaama Binu Uthaal, isagoo tolkiisa u digaya kuna oranaya �reer Bani Xanifoow waxaan idiinkaga digayaa arrinkan mugdiga leh ee aan lahayn iftiinka. Wallaahi ayaan ku dhaartaye waxay ayaan-darro haysataa qofkii rumeeya Musaylamata, dhinaca kale waa imtixaan lagu eegayo qofkii aan isaga rumeyn�, wuxuu kaloo Thumaama tolkiisa ku yiri �Reer Bani Xanifoow waxaa hubaal ah inaysan laba nebi wada kulmi karin hal waqti, Nebi Muxammad waa Rasuulkii Alle mana ka danbeeyo gadaashiis Nebi kale, mana jiraan nebi lala wadaajiyo isaga nebinimada, dabadeedna wuxuu aqriyay billoowga suuradda Qhaafir ee uu Eebbe (sw) ku leeyahay:
�Xaamiim (oo ka mid ah ereyada mucjisooyinka ku tusinaya, Alle ayaa og macnaha loola jeedo), soo dejinta kitaabka waxay ka ahaatay Allaha casiiska ah ee og wax walba. Waa Allaha dhaafa denbiga, aqbalana towbadda ayna ciqaabtiisu daran tahay ee leh nimcada badan Ilaah kale aan isaga ahayn ma jiro, xaggiisa ayaana loo noqon.�. Isagoo Thumaama is barbardhigayo hadalkaas Eebbe (sw) leeyahay, iyo hadalka ninka sheeganayo in isna lagu soo dejiyay aayado qur�aan ah. Thumaama wuxuu yiri ma hadalkii Eebbe (sw) ayaa lala barbardhigi karaa hadalka Musaylamata uu ku leeyahay � rahow iska ciy, cabbitaana ma diidi kartid, biyahana ma wasakhayn kartid�. Intaa kadib wuxuu Thumaama gooni ula baxay intii diinta islaamka ku hartay, ee ka mid ahaa tolkiisa. Way tageen iyagoo si jidka Alle ula dagaalamaya dadkii ka riddoobay diinta, iyagoo sidaas u sameenayayna si kalimadda Alle ay u kor ugu noqoto dunida.